Ka soo deji durdurrada raaxada bartaada Aria2 | Laga soo bilaabo Linux
Ka soo deji durdurrada raaxada bartaaga oo leh Aria2
Xulka wararka oo dhan | | Lagu taliyay
La soo dejinta faylasha durdurka ee Linux waa mowduuc la taabto marar badan tan iyo markii ay jiraan codsiyo badan oo loogu talagalay soo dejinta durdurinta oo la sii daayo oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo.
In kastoo Maanta waxaan arki doonnaa sida looga soo dejisto feyl durdurka raaxada bartayada, maaddaama mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee laga soo dejinayo durdurrada gegeda ay tahay inay u oggolaato dadka isticmaala inay kala soo baxaan faylasha kombiyuutarada meel fog, ama xitaa shabakadda deegaanka.
Ku soo dejinta xogta iyada oo loo marayo borotokoolka durdurku wuxuu leeyahay adeegsi sharci ah, inta badan bixiyeyaasha adeegga internetka uma arkaan habkaas, laakiin ma iska indho tiri karno in badan oo ka mid ah qaybinta Linux lagu soo dejinayo macnahan.
1 Rakibaadda Aria2
2 Sidee looga soo degsadaa durdur ka terminal-ka?
2.1 Soo dejiso durdurro badan isla waqtigaas
Waxaa jira macaamiil yar oo hagaagsan oo amar ah oo loogu talagalay Linux. Mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee la isticmaalo waa Aria2.
Tan tan waxay xamili kartaa xiriiriyeyaasha magnet-ka, faylalka durdurrada oo ay la socdaan noocyada kale ee soo degsashada sida FTP / SFTP, HTTP, Metalink iyo inbadan.
Rakibaadda macmiilka Aria2 ayaa suurtogal ka ah inta badan qaybinta Linux si fudud.
Marka laga hadlayo kuwa Debian, Ubuntu, Linux Mint isticmaalayaasha iyo wixii kale ee ka soo jeeda tan.
Waa inay taas ogaadaan Codsiga soo dejinta Aria2 ayaa loo heli karaa in lagu rakibo meelaha lagu keydiyo de ay distros. Marka rakibiddeeda, kaliya fur terminal oo ku qor amarka soo socda gudaha:
Halka kiisaska kuwa isticmaaleyaasha Arch Linux, Manjaro, Antergos ama wax kale oo ka soo jeeda Arch Linux.
Waxaad si toos ah uga heli kartaa Aria2 kaydinta Arch Linux iyo rakibiddeeda waxaa lagu sameyn karaa adoo fulinaya amarka soo socda ee terminal:
Kuwa kuwa Isticmaalayaasha Fedora ama wax uun ka dhasha, macmiilka soo dejinta Aria2 waxaa laga helaa ilaha ugu weyn ee barnaamijka Fedora, sidaa darteed waa cadaalad in si fudud loo rakibo.
Si tan loo sameeyo, waa inay furaan terminal oo ay ku qoraan:
Finalmente dhammaan noocyada OpenSUSE Rakibaadda Aria2 waxaa u heli kara adeegsadayaasha terminal-ka:
Sidee looga soo degsadaa durdur ka terminal-ka?
Markii horeba Aria2 ayaan ku rakibnay nidaamkayaga, waxaan bilaabi karnaa inaan awoodno inaan la tacaalno feylasha durdurka adoo caddaynaya URL-ka isku xidhka magnetka ama faylka durdurka.
Si aad u bilowdo soo dejinta mid ka mid ah labadan qaab ee lagu xusay, waa inaan fureynaa daaqad terminal ah dhexdeeda ayaan ku dari karnaa daadka durdurka mid ka mid ah siyaabaha soo socda:
Halka haddii ay leeyihiin xiriiriye faylka durdurka oo aysan rabin inay soo dejiyaan:
Ama deegaan ahaan
Marka tan la sameeyo, soo dejinta feylku wuu bilaabmi doonaa.
Markuu soo dejintu dhammaato, waa inaan riixnaa isku dhafka furaha "Ctrl + C". Adigoo riixaya waxay dhameyneysaa soo dejinta oo daabacaa fariin kugu ogeysiineysa halka ay ku yaalliin feylasha.
Soo dejiso durdurro badan isla waqtigaas
Aria2 waxay u oggolaan kartaa dadka isticmaala inay soo dejiso faylal badan oo durdur ah hal mar. Tan waxaa laga samayn karaa feyl ku jira halka laga soo galiyo webiyaasha oo ku qoran foomka liiska.
Iyada oo amarka echo, waxaan ku dari karnaa Torrent ama Magnet xiriiriyeyaasha faylka.
Ama raaxada deegaankaaga desktop waxaad ku abuureysaa feylal oo aad la socoto tifaftiraha qoraalka aad dooratay waxaad ku dari doontaa iskuxirayaasha feylasha aad soo degsaneyso.
Hadda si fudud ayaan u soo dejineynaa dhammaan faylashaas oo leh Aria2, waxaan dooneynaa inaan fulino amarka soo socda:
Ha iloobin inaad riixdo "Ctrl + C" iskudhafka furaha si aad u joojiso macmiilka markay soo dejintu dhammaato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Ka soo deji durdurrada raaxada bartaaga oo leh Aria2
Robert Bermejo dijo
Waan jeclahay! Waxaan isticmaali jiray macaamiil kale oo daadka ah laakiin si fiican iima aysan qancin…. Waxaan u maleynayaa inaan abuurayo qoraal ku shaqeynaya cron marar badan haddiise ay hesho .torrent meesha ay ku qeexeyso (taas oo noqon doonta galka galka sftp-kayga oo aan ka diri karo mobilka) waxay bilaabaysaa soo degsasho. Waqti ka hor sidan oo kale ayaan ku haystay mashiinka daaqadaha laakiin waxaan ku hirgelinayaa miiskayga '🙂
Waad ku mahadsan tahay maqaalka! 🙂
Jawab Roberto Bermejo
Maamulaha Gnome Encfs waa aalad aad u fiican oo lagu kaydiyo faylashaada
Fuchsia OS RC kii ugu horreeyay ayaa la sii daayay toddobaadyo ka hor oo in yar ayaa dareemay